Xukuumadda Somalia oo sheegtay AMISOM la geynayo Puntland hadii… |
Xukuumadda Somalia oo sheegtay AMISOM la geynayo Puntland hadii…
Xukuumadda Somaliya, ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in Puntland ay ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah Shabaabka galay deegaano ka tirsan Gobolka Nugaal.
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Somaliya Maxamed Cumar Carte,ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay diyaar u tahay in Ciidamada Amisom la geeyo Puntland haddii ay timaado baahi la xiriirta Al-shabaabka ka dagaallamaya Puntland.
Waxaa uu sheegay Ra’iisal Wasaare ku xigeen Carte in Puntland ay ka mid tahay Soomaaliya sidaa darteedna Amisom la geyn karo haddii loo baahdo.
” Dowladu waxay mar walba ka shaqeysaa sidii amniga loo sugi lahaa, Puntland iyo dowlad goboleedyada kale way kala shaqeysaa, iminkana iney sii xoojisaa ka ahee ilama aha iney halkaas kaga hareyso” ayuu yiri Ra’isal wasaare ku xigeenka Somalia Maxamad Cumar Carte.
Al-shabaab iyo Puntland ayaa ku dagaallamaya qeybo ka mid ah Gobolka Nugaal oo ay dhawaan gaareen Ciidamo ka tirsan Al-shabaab.Puntland ayaa sheegtay in ay guul ka gaartay dagaalka ay kula jirto Al-shabaablka tagay degaannada Garacad,Garmaal,iyo Bandar Bayla.